5 octobre 2021 – Trinitera Malagasy
5 octobre 2021 Njara Pascal
Ankasa Galata 2, 1-14/Salamo 116 Tsy ankasa Jonasy 4, 1-11/Salamo 85 Md Lioka 11, 1-4 Amin’ny fitohizan’ny fitantaran’ny Evanjely no hahafahana mahazo ny hevitra tian’i Lioka hahatongavana. Ny nanirahana ilay Samaritana dia ny haha-sambatra amin’ny maha-zanaka azy avy ny olombelona rehetra ka ho afaka hiantso am-pitokisana an’Andriamanitra hoe : Abba, Dada. Izany no ampianarin’i Jesoa antsika…
Ankasa Galata 1,13-24/Salamo 138 Tsy ankasa Jonasy 3, 1-10/Salamo 129 Md Lioka 10, 38-42 Ny ohatra navelan’ilay Samaritana dia manampy antsika hahazo bebe kokoa ny toetra mampiavaka ilay Mpampianatra milaza amin’izay mikatsaka ny fanjakany mba “handeha ka hanao toy izany ihany koa”. Tsy Mpisorona na Levita minia tsy hijery ny fahorian’ny hafa sanatria fa mpivahiny manaiky…
Ankasa Galata 1,6-12/Salamo 110 Tsy ankasa Jonasy 1, 1 – 2, 1.11/Jonasy 2, 3-8 Md Lioka 10, 25-37 Nirahin’i Jesoa hitory ny Fanjakan’Andriamanitra sy hanomana ny fiaviany ny mpianany. Na ny ho sambatra sy ho any an-danitra aza anefa ny faniriana kolokolointsika ao am-po, dia mety tsy hifanaraka amin’ny fampianaran’i Jesoa ny fiheverantsika izany lanitra izany….